China Security Fence fekitera uye Vagadziri | Hangtong
1.Security fenzi hunhu
1) Yese mapaneli anoshandisa pamusoro pe6mmmm yakasimba kaboni simbi waya kuti iturikwe.
Saizi mesh: 50 × 50,50x100mm, 50x200mm, Iyi pani ine V-danda inogona kukwidziridza anti-wallop.
Iyo inopisa yakanyikwa galvanized BTO reza waya isa pamusoro pefenzi panhare. Izvo zvichasimudzirwa mamiriro ekuchengetedza uye yakanatswa nharaunda.
Huru huwandu zvigadzirwa ave achishandisa mu Beijing Airport uye saka pane imwe nzvimbo hombe. Mutengi wedu anogutsikana kwazvo neKuchengetedza uye kutarisa kwakanaka.
2) Upamhi hwepaneli
Kubva 2200 - kusvika 3000mm
Kubva pa0.0-kusvika kusvika 8.0mm
Weldless simbi Quadrate post uye peach rudzi rwekutumira
Post ndeye 60 * 60, 80 * 80,50 * zana Kana kushandisa 70x100mm Peach mhando pothook post. Iyo yepamusoro ichave yakatetepa kana kuiswa V mhando yekutsigira bar. Iyo yakavezwa waya kana concertina waya inovandudza kuchengetedza kwakanyanya
1) Iyo positi yakakurumbira yakavigwa pasi pevhu 300-400mm uye ichidururira kongiri kana ichiiswa ivo.
2) Welded flange base pasi pekutumirwa, uye shandisa macustoms ekuisa pane yakaoma nyika.
3) Panel ine post yakagamuchirwa ABS engineering epurasitiki kana poda inodzivirira Metal clamp inogadzirisa kunyange yakakwirira simba mabhendi inosimbisa yakabatidzwa.I pothook yeiyo post inogona zvakare kubatana nepaneli zvakasimba uye yakasimba.
3.Popular chimiro fenzi mumusika
Peach positi haidi
V crank wedzera Kupisa wakadzika waya dhisiki waya: BTO-22 Dia 450 / Dia 500 / Dia 600
Fence inogona kuvezwa elekisheni kana inopisa yakanyikwa uye yakaiswa mumashure mekuita maitiro akajeka. Isu tinoshandisa inozivikanwa yepasi rose Powder (AkzoNobel) yakadururwa. Mukudaro anogona kuwana zvinopesana nehutachiona uye iyo ultraviolet radiation. Kaviri coating layer yakakwira mhando anti uori Iyo refu hupenyu huchave hwakareba makore gumi.
Polyester poda yakavharwa: RAL 6005, RAL9005, RAL9010, RAL5010, RAL7037, RAL1006
PVC yakadzvanywa: RAL6005, RAL9005, RAL9010.
Imwe ruvara inowanikwa sekukumbira kwevatengi.
Iyo inowanzoshandiswa mu Airport, Maindasitiri, Mauto, Jeri uye nezvimwe kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwakaiswa
Yapfuura: High kuchengetedza anti kukwira fenzi
Inotevera: D Pale Palisade Fence